Ku noqoshada Barashada Shaqsiyadeed: Su’aalaha Badanaa Lays weydiiyo - MPS_CMF
Ku noqoshada Dugsiyada: Su’aalaha Badanaa Lays weydiiyo
Mar allaale iyo markaan diyaar u nahay inaan ardayda ku soo dhoweyno dhismayaasha, macluumaadka soo socda ayaa tilmaamaya qorshahaDugsiyada Dadweynaha Minneapolisee sida loogu gudbi doono si ammaan ah ardaydain aysi shakhsi ahaan ah wax u barataan. Tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedkaan, waxaan ku jirnay Wajiga 2-aad kaas ooay waxbarashada ku baxaysay masaafada fog dhammaan ardayda dhiganayeenwaqti buuxa oo la isticmaalayay xeeladaha 5-ta Waji ee Waxbarashada Ammaanka ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis.
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay ka fekerayaan sida ay uga gudbi karaan wejiyada 3 illaa 5 taas oo ah marka iskuulladu u furan yihiin waxbarashada shaqsi ahaaneed ama qof ahaaneed ee taageerada tacliinta. In kasta oo aan go'aan kama dambays ah laga gaadhin oo ku saabsan ardayda soo laaban doonta inta lagu jiro weji kasta, xaaladaha qorshaynta ayaa la diyaarinayaa si adeegyada sida gaadiidka loo go'aamiyo. Dhanka kale, waxaan ogsoonahay in shaqaalaha iyo qoysasku ay qabaan su'aalo badan oo ku saabsan inay si buuxda ugu sii jiraan barashada masaafada ama ay tixgeliyaan ku noqoshada barida iyo barashada.
1. Halkee ayaan ka heli karnaa macluumaad ku saabsan waxa Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ay sameynayaan si ay uga caawiyaan shaqaalaha iyo ardayda inay nabad galaan haddii aan ku soo noqonno dugsiyada?
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) waxay leeyihiin qorshaha u diyaargarowga dhismaha iskuulada oo lagu soo dhajiyay shabakadeena internadka ee Ku noqoshada Dugsiyada.
2. Maxaad ugu socon weydeen Wajiga 3-aad ee xiga?